“Waxaan casharro ku saabsan sida loo sii fiicnaado ka qaadanayaa Ronaldo inta lagu jiro Karaantiilka” – Xiddig ka tirsan Man Utd – Gool FM
“Waxaan casharro ku saabsan sida loo sii fiicnaado ka qaadanayaa Ronaldo inta lagu jiro Karaantiilka” – Xiddig ka tirsan Man Utd
(Manchester) 26 Abril 2020. Ciyaaryahanka Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Scott McTominay ayaa shaaca ka qaaday inuu casharro ku saabsan sida sii loo fiicnaado ka qaadanayo Cristiano Ronaldo muddada lagu jiro karaantiilka faafaha Coronavirus.
Xiddiga khadka dhexe ayaa qaab ciyaareed fiican ku jiray intii aan la guda galin qalalaasaha coronavirus, wuxuuna shaaca ka qaaday inuu raadinayay mid ka mid ah talooyinka ugu fiican.
Laacibka Kooxda Manchester United ee Scott McTominay ayaa ka qaadanayay Cristaino Ronaldo casharro ku saabsan sida uu naftiisa ugu ilaashan karo taam ahaansho, isla markaana uu diiradda u saari lahaa inta lagu guda jiro xannibaadda Coronavirus.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Scottish ayaa ku xisaabtamaya in lambarkii 7-aad hore ee kooxdan uu yahay macallinkiisa marka ay timaado in si wanaagsan looga ilaaliyo jirka.
Isagoo hadlayay baloogga rasmiga ah ee Manchester United, McTominay wuxuu yiri: “Waxaad fiirineysaa Cristiano Ronaldo iyo ragga sidan oo kale ah – maskaxdooduna ay ku taal meesha ugu sarreysa.
“Wax ka fiican kama heli doontid taas aniga ahaan, anigoo eegaya qof sidaas oo kale ah, jimicsiga uu helay iyo habka uu naftiisa u isticmaalo.
“Waxaan hadda arkay sawir isaga ah labo maalmood ka hor, isagoo akhrinaya oo dib u eegaya waxyaabo kala duwan oo uu isku dayayo inuu noloshiisa ku barto garoonka dhexdiisa.
“Dadku aad bay ugu deg deg badan yihiin noloshooda.”
McTominay oo 23-sano jir ah wuxuu muujiyay bandhig cajiib ah si uu naftiisa uga dhigo xubin muhiim u ah kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Laacibkan Khadka dhexe ee ku dhashay Lancaster ayaa u saftay kooxda 30 kulan xilli ciyaareedkan, waxaana uu noqday mid ay aad u jecel yihiin taageerayaal oo u sacab tuma kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford.